Sanduuqa Gurisiinta ee Weyn (GMHF) waa hay'ad aan faa'iido doon ahayn, guryaha la awoodi karo iyo hay'ad maaliyadeed horumarinta beesha (CDFI). Ujeedadoodu waa inay ku maal gashadaan guryaha la awoodi karo iyo horumarinta joogtada ah si loo xoojiyo bulshooyinka ku nool gobolka Minnesota oo dhan si loo hubiyo in qof kastaa leeyahay meel nabadgelyo leh, haboon iyo mid dhaqaale oo lagu wici karo guriga. GMHF waxaa la bilaabay 1996-kii, iyada oo loo marey dadaal wadajir ah oo ay sameeyeen Hay'adda McKnight Foundation iyo Blandin Foundation si wax looga qabto baahida degdegga ah ee guryaha loo siman yahay ee ka baxsan aagga meter labadaba. GMHF waxay heleysaa taageero guud oo ka socota McKnight iyada oo qayb ka ah barnaamijka Gobolka & Bulshooyinka, kaas oo lagu maalgelinayo xeeladaha guryaha la awoodi karo iyo nidaamyada kordhiya xasilloonida qoyska iyo qoysaska isku xiraan fursado.
Magaalada Rochester, GMHF waxay bixisay maalgelinta Guryaha Hore ee loogu talagalay mashruuc si loogu badalo hantida dhibaatada leh ee Park Kutzky leh dhismo afar-konton ah. Sida laga soo xigtay bilayska Rochester, hantidii hore waxay ahayd inta badan mawduuca ay tahay bileyska booliska iyo ilaha dhaqdhaqaaqyada socda. Tan iyo dhamaystirka dhismaha cusub, oo loo yaqaan Weigel Place, xaafadda ayaa isbeddelay. Opal Macken waa milkiilaha cusub ee Weigel Place oo ka mahadceliyey barnaamijka lacageed ee la awoodi karo in Homes ay awood u leedahay inay bixiso taageerada GMHF. Opal wuxuu ka shaqeeyaa ganacsi yar oo ka baxsan gurigeeda cusub waxaana uu ku faraxsan yahay Guryaha Hoyga iyo Gacan-ku-helidda fursadaha.
"Tani waa guriga ugu horreeya ee aan iibsaday, waana riyo ah run," ayay tiri. "Si aad u hesho gurigeyga aniga ayaa i siinaya dareen amni iyo xorriyad - wax aanan u malaynaynin inuu ahaa mid fog oo suurtagal ah mar uun noloshayda."
Laga soo bilaabo 1996, GMHF waxay maal-galisay in ka badan $ 216 milyan in ka badan 150 bulshooyinka Minnesota, taas oo horseeday in ka badan 12,000 guri oo la awoodi karo oo loogu talogalay qoysaska dakhligoodu hooseeyo, carruurta iyo shakhsiyaadka, iyo 500 horumarin.